Iwe unogona ikozvino Jailbreak kubva kuMac | Ndinobva mac
Tinogona ikozvino Jailbreak iOS 8.X kubva kuMac
Jordi Gimenez | | iOS, Mac Os X, Apple zvigadzirwa, Tutorials
Nhasi tichaenda kunoona dzidziso kuJailbreak chishandiso cheIOS uye kubva kuMac kwedu nechishandiso icho vavaki ve 25pp application vachangotanga. Mukutaura kuputsika kwejeri kweazvino mavhezheni eIOS kwave kuripo kwenguva yakareba kuvashandisi veWindows (vanogara vachiwanzo vhura iyi vhezheni zvisati zvaitika) asi ikozvino Zvaitwa inowanikwa kune vese vashandisi veMac.
Icho chishandiso pachacho chiri chose muChinese uye kuti iwe usarasika mukuita kwekugadzira iyo jb kune yako iOS chishandiso, tichaenda kunoona diki gwara nayo yatinogona nayo jailbreak. Chinhu chekutanga uye chakakosha pamberi pechinhu chero chipi zvacho chiri dzorera chigadzirwa kuMac yako iyo yauri kuzoita iyo jb, ipapo isu tinongofanirwa kutevedzera matanho aya.
Iyo PP yekuparara kwejeri haina kubhadharwa uye inowirirana neyakasiyana iPhone, iPod uye iPad mamodheru ayo ane chero eimwe 8 iOS vhezheni akaisirwa, kunyange achiwedzera yazvino iyi yabuda. Chishandiso chekuita jb chakagadzirwa nePP25 chinoshanda ye Macs ine OS X 10.7 kana yepamusoro yakaiswa.
Pano isu tinosiya runyorwa rweIOS zvishandiso zvinoenderana neiyi jb:
iPad / iPad Mhepo / iPad Mhepo 2
Kana iwe uine mudziyo une jb kubva pane yapfuura vhezheni, zvakanak kudzoreredza kubva pakutanga (kutora iyo backup kopi uye wozoirodha zvakare) kuchenesa chero kukundikana kana dambudziko reakambomisikidzwa kana kudzimwa tweaks. Iye zvino tinoenderera mberi nemaitiro kurodha pp vhezheni 1.0 yeMacTinogona kuita izvi kudzvanya zvakananga pano, kana kuwana iyo zviri pamutemo webhusaiti kubva kune vanogadzira 25pp.
Kana izvi zvangoitwa isu tichagadzirisa kune iyo yazvino vhezheni inowanikwa, iOS 8.1.2 uye nekuda kweizvi, zvakanak kuzviita kubva kuTunes.Izvi zvinokurudzirwa kuti kana backup yaitwa, tinya pakudzorera uye nekusaita chero password kuti uwane iyo kifaa (SIM pini, vhura kodhi) uye shandisa yendege modhi. Zvino matanho ari nyore:
Isu tinovhura iyo yakadzingwa application PP
Isu tinobatanidza chishandiso netambo yeUSB, bvisa makiyi, deactivate "Tsvaga yangu iPhone" uye tisiye chishandiso chine ndege nendege uye inoshanda Wi-Fi
Isu tinotanga nzira yeJailbreak nekudzvanya bhatani repakati rinowanikwa mune chishandiso
Muhwindo repiri tine nzvimbo mbiri dzatinobaya, tinya pane sarudzo kurudyi
Maitiro acho anotanga uye mushure mekutanga otomatiki kweiyo iOS chishandiso, Cydia inoonekwa
Pane imwe nguva takatangazve isu kuvhura Cydia uye kugadzirisa
Ino ndiyo nguva yekuisa yedu backup
Funga kuti iyi sarudzo nyowani yeMac yakavakirwa pane kodhi yechinhu chakapfuura chishandiso chinoshandiswa paWindows chinonzi TaiG, saka zvakachengeteka kupaza jeri. Pasati paine dambudziko mukuita, tinogona nguva dzose shandisa backup yatinayo muTunes yakachengetedzwa.
Iyo yekuvandudza mune yazvino vhezheni yeIOS haishamise, asi zvinogara zvakanaka kuti uve neichigadzirwa neazvino zviripo iOS uye kana isu tine sarudzo yejerebreak, saka zvakanaka. Ndinovimba kune anotevera mavhezheni eIOS chishandiso chejailbreak neMac yedu ichavhurwa panguva imwe chete sezvo tichigara tiine Windows vhezheni yekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iOS » Tinogona ikozvino Jailbreak iOS 8.X kubva kuMac
Zvinoita kunge zvisiri panzvimbo yekuti iwe ushandise iyi foramu yeruzivo kusimudzira jailbreak pane zvishandiso. Wese munhu ndiye muridzi wekuita chero chaanoda nemidziyo yavo uye ibasa remunhu wese, asi kukurudzira kuita izvi kunopfuura bhizinesi iro bhuku rakadai rinofanira kuve naro. Zvinonzwika zvakafanana kwandiri kuti unondipa zano rekuti utore mapirati mapurogiramu pakombuta yangu pane kushandisa zviri pamutemo. Chinhu chimwe ndechekuti ini ndinozvodhaunirodha ndoga uye zvakanyanyisa ndezvekuti vanondikurudzira kubva kubhuku repamutemo rine trajectory iyi.
Ini ndinofunga ndiyo chete nzira yekusiyanisa hundi negorosi.
Ndinovimba maonero angu haakugumbure asi ndinofunga unofanirwa kuchenjerera nezvaunotumira.
Akanaka Dhanyeri, chokwadi ndechekuti hatimanikidze chero munhu kuti aite jb pane chishandiso chavo uye chinyorwa chinotsanangura maitiro kuzviita kubva kuMac nekuti kusvika nhasi zvaive zvisingaite mune iyi vhezheni uye pasina mamiriro ezvinhu zvinomanikidzwa kuzviita pa mudziyo wako.
Iyi ndiyo nyaya inondinakidza uye kana iwo musoro weblog hauna kutariswa zvakananga paMac, tinogona kutaura kwenguva yakareba nezveJailbreak pane zvishandiso zveIOS. Asi izvi hazvisizvo, muchinyorwa isu tinongoda kufambisa basa revaya vanoda kuita jb pane yavo iOS chishandiso uye isu hatiratidze zvinongedzo zve'mahara 'kunyorera kana zvakafanana, iyo jailbreak yakanyanya kupfuura izvozvo .
Kune rimwe divi, ita pachena kuti kuita iyo Jb pane yako iPhone hazvisi pamutemo zvachose, zvinoitwa neumwe neumwe kana jb yaitwa inoenda nemunhu uye haina chekuita nekuratidzira zvisiri pamutemo kurodha mapeji kana zvakafanana.
KuSoy de Mac tinopesana zvachose nehusungwa. Kwazisai uye nekutenda nekutaura kwako Daniel.
Isa iyo screensaver zvakare neyako yaunofarira RSS feed pane OS X Yosemite
Ko iyo inofungidzirwa iPad Pro inogona kugovera musika mugove kune ramangwana MacBook Air?